ဂျပန်နိုင်ငံ KOBE မြို့ရဲ့ အနီးမြင်ကွင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ဂျပန်နိုင်ငံ KOBE မြို့ရဲ့ အနီးမြင်ကွင်း
ဂျပန်နိုင်ငံ KOBE မြို့ရဲ့ အနီးမြင်ကွင်း
Posted by manawphyulay on Aug 31, 2011 in Photography, Travel | 11 comments
တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးပေမယ့် သူငယ်ချင်းရိုက်လာတာလေးတွေ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံ KOBE ကို သင်္ဘောကပ်တုန်း ရိုက်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
မျက်စိအေးလိုက်တာ။သူများနိုင်ငံတွေနော် သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ ကြည့်လို့ ကို အရသာရှိတယ်။လှတဲ့နေရာရွေးရိုက်ထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး(ဗမာအတွေး)
– သင်္ဘောတွေ နဲ့ ရွှေပင်လယ်
– ရှုခင်းလေးကိုကြည့်လိုက်ရတာ ရင်ထဲကိုအေးချမ်းသွားတယ်
Whenever I thought about Japan, I felt3different feelings.
(1) Scenes are beautiful & weather is cold.
(2) Living cost is too high & everything is expensive.
(2) Sleepless & very tired sailor life.
Explanation for No.3.
In Japan, Labor charges are very costly, especially in nighttime.
Morning shift ( 0800-1600 ) = 200 $ ( just example )
Night Shift ( 1600-2400 ) = 400 $ (2times to Morning shift )
Late Night Shift ( 2400-0800 ) = 600 $ (3times to Morning shift )
So most stevedore companies don’t want to work in night time,
Because, it costs too much in nighttime.
So, they made (appointed) our ship to alongside early morning
(around 0600 Hrs ).
They started working at 0800 & they tried to finish before 1600.
After that ( around 1700 Hrs ) & during the nighttime,
we had to sail to next port.
It became regular to sail in nighttime & loading in the daytime.
Sometime, we didn’t even haveasleep for3or4days.
It liked hell.
Whatatough sailor life.
ကျွန်မကတော့ ဂျပန်ကို အလုပ်အတွက်သွားခဲ့တာမဟုတ်တော့ ကိုဖော်ရိန်းလိုမျိုး မမြင်ဘူး။ ဂျပန်မှာနေခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေကို အခုထိအသေးစိတ်သတိရနေတုန်းပဲ။ ဂျပန်အစိုးရပေးတဲ့ စကော်လားရှစ်က အရမ်းများလွန်းတာရယ်၊ အဆောင်ခ မီတာခ ရေခ အတော့်ကို သက်သာတာရယ်၊ ကျောင်းက အဆောင်နဲ့နီးတာရယ်၊ ရာသီဥတုကကောင်းတာရယ်၊ ဘာသာစကားအခက်အခဲမရှိတာရယ် ဂျပန်မှာသိပ်ပျော်ခဲ့တယ်။ ဂျပန်က ဈေးကြီးတာမှန်ပေမဲ့ ဥရောပကို မမှီပါဘူး။ ဂျပန်ယန်းတစ်ရာ(ကျပ်၁၀၀၀၀န်းကျင် ထိုခေတ်က)ဆိုင်တွေလည်း နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်လေ။
By the way, Ma Naw Phyu Lay,
Your friend’s ship is ( most probably )
derrick ( union purchase ) using & general cargo & feeder & small ship,
which normally run between Japan, China & Korea ( coastal ).
It might be very tired life.
သူငယ်ချင်းသင်္ဘောက ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ နယူးဇီလန် တို့ကို ပုံမှန်သွားနေတဲ့ သစ်သီးတင်တဲ့ reefer ship ဖြစ်ပါတယ်။ ရောက်ရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ပုံလေးတွေလည်း ဆက်လက်မျှဝေပေးပါဦးမယ်…. အားလုံးရောက်ဖူးသွားတာပေါ့နော်။
ကျနော်တို့မှာ ဓါတ်ပုံလေးတွေကိုကြည့် ပြီးတော့ပဲ စိတ်ဖြေရမှာမို့ပါ၊
ဂျပန်နိုင်ငံဆိုတာကြီးကို ရောက်ဖို့က တယ်မလွယ်တဲ့ ကိစ္စ မို့ပါ။
မနောရေ…. KOBE ဆိုတော့မှ KOBE BEEF စားချင်လာပြီဗျ။ KOBE မှာ အကောင်းဆုံးနဲ့ ဈေးအကြီးဆုံးက KOBE BEEF ပါ။ ပြောရင်းစာချင်လာပြီနော်….
kobe က လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကျော်လောက်က ငလျင်ဒဏ်အကြီးအကျယ်ခံခဲ့ရတဲ့ မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခြေအနေကနေ ခုလိုပြန်လည်တိုးတက်ထွန်းကားအောင် ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ ဂျပန်တွေရဲ့ အရှုံးမပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေ အတုယူဖို့ကောင်းပါတယ်။